प्रचण्ड क्रमशः बिलाउँदै, माधव नेपाल फोहोरको डंगुर : ओली « Name of Truth News : News Portal in Nepal
प्रचण्ड क्रमशः बिलाउँदै, माधव नेपाल फोहोरको डंगुर : ओली
प्रकाशित मिति : २०७८, भाद्र, ३१, बिहीबार १७:०७
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ क्रमशः बिलाउँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । एमाले जिल्ला कमिटी भेलालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै ओलीले नेकपा हुँदाको प्रचण्ड र अहिलेको प्रचण्डबीचको भिन्नता दाँज्दै भने, ‘प्रचण्डरूपी त्यत्रो जहाज उडेको, हेर्दै गयो बिलाउँदै जान्छ, अलिक पर जाँदा विस्तारै देख्न छोडिन्छ ।’ ओलीले प्रचण्डतिर लागेका नेता कार्यकर्तालाई उनको घरेलु कार्यकर्ता नहुन पनि सुझाव दिए ।
माओवादीका कार्यकर्ता कि प्रचण्डको सेवक भन्दै ओलीले उनीहरुलाई एमालेमा फर्कन आह्वान गरे । ‘हिजो हामी नेकपा भएर एकीकृत भइसक्यौँ । तपाईंहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो कि प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता ? प्रचण्डलाई घाँस हालेर के दिन्छन् ? मन्त्री दिन्छु भन्थे अहिले त त्यो पनि दिन छाडे । दुई महिना भइसक्यो अहिले मन्त्री पनि बनाएको छैन’, ओलीको टिप्पणी छ ।
त्यस्तै उनले माधव नेपालतिर गएका कार्यकर्ताहरुलाई पनि एमाले मौरी भएको भन्दै फोहोरको डंगुर छोडेर फर्कन आह्वान गरे । ‘मौरीको संगत लागेर गयो भने फूलबारीमा पुगिन्छ । झिँगाको पछि लागेर फूलबारी पुगिँदैन । फोहोरको डंगुरमा पुगिन्छ, त्यस कारण मौरीका पछि लाग्नुस् । नेकपा एमाले भनेको मौरीको गोलो हो,’अध्यक्ष ओलीले भने ।